Matic Oo Mourinho U Sheegay In Xitaa Hadii Uu FA Cup Qaado Uusan U Ahayn Sanad Fiican Ku Jirin + Sababta %
Nemanja Matic, ciyaaryahanka khadka dhexe uga dheela kooxda kubada cagta Manchester United, ayaa wuxuu aaminsan yahay in xitaa hadii ay xili ciyaareedkan ku guuleystaan tartanka FA Cup-ka, uusan u ahayn mid guul ah oo iyaga u ah.
Inay kooxda Sevilla kasoo reebtay tartanka Champions League, in Manchester City ay ugu cad-cadahay Premier League iyo in uusan jirin tartan kale oo ay udagaalami karaan oo aanan ahayn FA Cup-ka, ayaa keentay in Matic uu hadalkaan ka dhawaajiyo.
Red Devils, ayaa waxay hada ku wajaheysaa wareega Afar dhamaadka FA Cup-ka dhigeeda Tottenham, iyadoona tani ay xitaa ay shaki badan gelin karto inay usoo baxaan Final-ka, maadaama Spurs-ka, ay tahay koox dhib badan.
Mar la weydiiyay hadii uu ku filan tahay Man United inay ku guuleysato FA Cup-ka ayaa wuxuu ku jawaabay: “Waxaan umaleynayaa Maya. Hadii aan ku guuleysano waa mid fiican, laakiin ma ahan wax qabad fiican oo cajiib ah.
“Adigoo haysta afar tartan xili ciyaareedkan oo dhan – hadii aad ku guuleysato hal, aniga ahaan ma ahan mid iigu filan, laakiin waxaad mar walba wanaagsan inaan sameyso wax fiican,” ayuu hadalkiisa kusii daray, laacibkii hore ee Chelsea.
“Marka Premier League la joogo, markii aan noqoto, afarta koox ee ugu horeysa ma ahan mid fiican, laakiin waxaad udheeshay si wanagasan, si aad ugu soo baxdid Champions League, xili ciyaareedka dambe,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Hadii aad ku guuleysato FA Cup-ka, kuma dhihi karo waxaad qaadatay sanad guulo ah, laakiin waxaad qaadatay sanad fiican,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Nemanja Matic, oo Old Trafford uga soo biiray xagaagan kooxda Chelsea.
CR7 Oo Si Kulul Uga Jawaabay Wararka Sheegaya In Laga Diiday Bixinta Lacag Si Uu Xabsi Uga Badbaado